tijaabo kala sooca lahayn ay gacanta ku qaadan kartaa qaabab badan oo loo isticmaali karaa in ay bartaan noocyada kala duwan ee dhaqanka. Laakiin, at ay asaasiga ah, tijaabo nasiibin gacanta ku leeyihiin afar ah maaddooyinka waaweyn: qorista ee ka qaybgalayaasha, randomization daaweynta, bixinta daawaynta, iyo cabbirka ee natiijada. Da'da digital ma beddelo nooca aasaasiga ah tijaabo, laakiin waxa ay iyaga ka dhigi fudud Ma'aha. Tusaale ahaan, ee la soo dhaafay waxaa laga yaabaa in ay ku adag tahay in la cabbiro akhlaaqda malaayiin dad ah, laakiin in hadda joogto ah ka dhacaya nidaamka badan digital. Cilmi-kii fahmi karaa sida ay u fuula, kuwaas oo fursado cusub oo ay awoodaan in ay u ordaan tijaabo ku jiray oo aan macquul ahayn horey u ahaan doonaa.
Si aad u samayso tani qayb dhan oo dheeraad ah la taaban karo-labadaba la mid ah waxa ku hadhay oo waxa uu is beddelay-ha ee ka fiirsada Michael Restivo iyo Arnout van de Rijt ee (2012) . Cilmibaadhayaasha ayaa doonayay in ay fahmaan saamaynta abaal faca aan rasmi ahayn oo ku saabsan darsaday tifaftirka in Wikipedia. Gaar ahaan, waxay dersayay saamaynta barnstars, abaalmarinta ah in Wikipedian kasta oo ku siin kara in Wikipedian kasta oo kale in ay qirtaan oo shaqo adag iyo Juurille. Restivo iyo van de Rijt siiyey barnstars 100 mudan Wikipedians. Markaas, Restivo iyo van de Rijt dabagal ku darsaday xiga si Wikipedia ee qaata 'in ka badan 90-ka maalmood ee soo socda. Inta badan si ay u la yaab leh, dadka ay wax u abaal barnstars lagu waday inuu ka dhigi itusi yar ka dib markii la helo mid ka mid ah. In si kale loo dhigo, barnstars u muuqday in niyad halkii dhiiri qayb.
Nasiib wanaag, Restivo iyo van de Rijt aan la ordaya tijaabo "perturb iyo dhawrtaan"; waxay socda tijaabo nasiibin gacanta. Sidaas, marka lagu daro doorashada 100 qayb top si ay u helaan barnstar ah, waxay sidoo kale gaaray 100 qayb top kan iyagu ma ay siin barnstar ah. boqol Kuwani noqday kooxda la xakameeyey, iyo kuwa helay barnstar ah iyo kuwa aan kala sooc lahayn loo gooyay. Marka Restivo iyo van de Rijt eegay koox gacanta ku waxay heleen in ay sidoo kale lahaa hoos u yaacday ee ku darsaday. Ugu dambeyntii, marka cilmi dadka in kooxda daaweynta (ie, helay barnstars) iyo dadka la barbar dhigo in kooxda ay gacanta ku, waxay heleen in barnstar uu keeno tifaftirayaasha in ay gacan ku saabsan 60% ka badan. Laakiin, kororkan in kaalin waxaa loo qaadan meel oo qayb ka ah hoos u dhac guud ee labada koox.
Sida daraasadan waxay muujinaysaa, koox gacanta ku tijaabo ah waa muhiim in Jid xoogaa socda. Si hufan loo cabbiro saameynta barnstars, Restivo iyo van der Rijt loo baahan yahay si ay u dhawraan dadka in uusan helin barnstars. Marar badan oo aan cilmi-yaqaanaan tijaabo ay ku guuldareysato inay mahad qiimaha cajiib ah oo ka tirsan kooxda ay gacanta. Haddii Restivo iyo van de Rijt ma lahayn kooxda la xakameeyey, ay si sax ah ay barbaro galeen lahaa gabagabo khaldan. Kooxaha Control waa mid aad muhiim u ah in CEO ee shirkad weyn casino ayaa sheegay in ay jiraan saddex kaliya siyaabo in shaqaalaha la eryi karo ka guutadiisa, xatooyo, kadeedka galmada, iyo ordaya tijaabo ah oo aan koox gacanta (Schrage 2011) .
Restivo iyo van de Rijt ee waxbarasho muujinayaa afarta ah maaddooyinka ugu weyn ee tijaabo ah, qorista, randomization, qabashada, iyo natiijooyinka. Si wadajir ah, kuwaas oo afar ah maaddooyinka ogolaan saynisyahano ay ka gudbaan Xiriirka iyo cabbiro saameynta sababaha daaweynta. Gaar ahaan, randomization ka dhigan tahay in marka aad is barbar natiijooyinka kooxaha daaweynta iyo gacanta oo aad ka heli qiyaasta saamaynta sababaha of faragelinta in set in ka qaybgalayaasha. In si kale loo dhigo, la tijaabo nasiibin gacanta waxaad noqon kartaa hubiyo in wax kasta oo kala duwan oo ku natiijooyinka waxaa sababa faragelinta iyo ma confounder ah, sheegashada ah in waxaan ka dhigi saxda ah Lifaaqa Farsamada isticmaalaya qaab natiijada ka iman kara.
Waxa intaa dheer in isagoo sawir fiican oo ka mid ah makaanikada ah tijaabo, Restivo iyo van de Rijt ee daraasadda ayaa sidoo kale muujinaysa, in logistics ah tijaabo digital noqon kartaa gebi ahaanba ka duwan yahay tijaabo analog. In Restivo iyo tijaabo van de Rijt ee, waxay ahayd ay fududahay in la siiyo barnstar in ay qof kasta oo adduunka ah oo ay ahayd fudud si ay ula socdaan natiijada-tirada itusi-muddo dheer (sababtoo ah taariikhda edit waxaa si toos ah duubay by Wikipedia). Awood Tani in ay samatabbixin daaweynta iyo cabbiro natiijooyinka lacag la'aan waa tayo duwan tijaabo ee la soo dhaafay. Inkasta oo tijaabo this lug 200 oo qof, waxaa laga yaabaa ayaa la ordi la 2,000 ama 20,000 oo qof. Waxa ugu weyn ee ka hortagga cilmi ka qaadeysaa ay tijaabo by qodob ka mid ah 100 waxaa ma lacag, waxa uu ahaa anshaxa. Taasi waa, Restivo iyo van de Rijt ma doonayaan in ay siin barnstars tifatirayaasha undeserving oo aysan rabin in ay tijaabiyaan in ay carqaladeeyaan bulshada Wikipedia ee (Restivo and Rijt 2012; Restivo and Rijt 2014) . Sidaas daraaddeed, in kastoo tijaabo ee Restivo iyo van de Rijt waa fudud, waxa ay si cad u muujinaysaa in qaar ka mid ah wax ku saabsan tijaabo ku joogay la mid ah iyo qaar ka mid ah ayaa is beddelay. Gaar ahaan, macquulka aasaasiga ah ee tijaabinta waa isku mid, laakiin logistics ku beddeleen. Next, si ay u si cad u jaraan fursado abuuray by isbedelka this, waxaan is barbar doonaa tijaabo ah in cilmi hadda samayn karaa si aan noocyada tijaabo in lagu sameeyo ee la soo dhaafay.